कस्तो होला ट्रम्पको विश्व आर्थिक नीति ? « Surya Khabar
कस्तो होला ट्रम्पको विश्व आर्थिक नीति ?
काठमाडौँ । विश्वकै शक्तिशाली पद अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले अन्य देशका लागि लिने आर्थिक नीति र सहयोगमा कस्तो फेरबदल आउला रु भन्ने जिज्ञासा अहिले चौतर्फी छ । नेपालमा सोबारे पर्ने प्रभावमा विभिन्न अड्कल काटिन थालेको भएपनि खासै असर नपर्ने विश्लेषण परराष्ट्रविज्ञहरूको छ ।
परराष्ट्रविद् तथा पूर्व अमेरिकी राजदूत डा। सुरेश चालिसेले अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिने आर्थिक नीतिमै सहयोग बढ्ने या कटौती हुनेमा भर पर्ने बताए । ‘नेपाल र अमेरिकाबीचको प्रगाढ सम्बन्धका कारण आर्थिक सहयोगमा धेरै फेरबदल हुने सम्भावना छैन तर नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको आगामी नीतिमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित हुनुपूर्व चुनावी प्रचारमा उनले दिएको अभिव्यक्तिले विश्वबजारमा हलचल आएको थियो । विदेशी सहयोग र वैदेशिक रोजगारीमा कटौती हुने खालका अभिव्यक्ति उनको थियो । चुनावी प्रचारअनुसार ट्रम्पले कार्यनीति बनाए रोजगारीमा ठूलो कटौती हुनसक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ । शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।